युरोकप छनोट : स्विडेनमाथि स्पेनको सानदार जित | Tapaiko Khabar
युरोकप छनोट : स्विडेनमाथि स्पेनको सानदार जित
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : जेठ २८, २०७६ खेलकुद
स्पेनले युरोकप छनोट फुटबलमा स्विडेनलाई सहज रुपमा पराजित गरेको छ ।
सोमबार राति युरोकपअन्तर्गत समूह एफको खेलमा स्पेनले स्वीडेनलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । स्पेनको जितमा कप्तन सर्जियो रामोस, अल्भारो मरोटा र मिकेल ओयारजबलले गोल गरे ।
पहिलो हाफसम्म भने स्पेनलाई स्वीडेनले गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो । तर दोस्रो हाफमा स्पेनले तीन गोल गर्न सफल भयो । खेलको ६४औं मिनेटमा स्पेनले पेनाल्टी पायो । पेनाल्टीबाट गोल गर्दै रामोसले स्पेनलाई १–० गोलको अग्रता दिलाए ।
८५औं मिनेटमा स्पेनले फेरी अर्को पेनाल्टी पायो । योपटक भने पेनाल्टी प्रहार गर्न मरोटा आए । उनले पेनाल्टीबाट सहजै गोलगरेसँगै स्पेनले २–० गोलको अग्रता बनायो । त्यसको दुई मिनेट वित्न नपाउँदै खेलको ८७औं मिनेटमा स्पेनले अर्को गोल थप्न सफल भयो । ओयारजबलले गोल गर्दै स्पेनलाई ३–० गोलको जित दिलाए ।
त्यस्तै, अन्य खेलमा भने डेनमार्कले जर्जियालाई ५–१ ले, रोमानियाले माल्टालाई ४–० ले र पोल्यान्डले इज्रयाललाई ४–० गोलअन्तरले नै पराजित गरेको छ ।
यस भन्दा अगाडीकिन सर्‍याे नेपाल लोक स्टारको मेगा अडिसन मिति ? कुन प्रदेशको कहिले हुन्छ मेगा अडिसन ?
यस पछिप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन
टी -२० विश्वकप क्रिकेट एसिया फाइनल: मलेसियाद्वारा नेपाललाई ८४ रनको लक्ष्य
इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कप: रियल मड्रिडमाथि वायर्न म्युनिखको सहज जित
भद्रगोलमा देखिएका नयाँ अनुहारहरु रुचाएनन् दर्शकले
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने चर्चित हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल ६ हप्तापछि पुन प्रशारणमा...
यसबर्ष दशैंको टीकाको साइत १० बजेर ३५ मिनेटमा
यसपटकको दशैंको टीकाको साइत बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा परेको बताइएको छ...